20 Tilmaamood oo Lagu Wado Isbadalidda E-Ganacsiga Xilligan Fasaxa | Martech Zone
20 Tilmaamood oo Lagu Wado Is-Beddelka E-Ganacsiga Xilligan Fasaxa
Arbacada, Nofeembar 16, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Saacaddu way hagaageysaa, laakiin kama habsaamin bixiyeyaasha ganacsiga e-commerce inay habeeyaan goobahooda si ay u kaxeeyaan beddelaad badan. Infografigani wuxuu ka socda khubarada ku-habboonaanta beddelaadda ee wanaagsan waxay soo bandhigeysaa 17 talooyin adag oo ku habboon oo aad u baahan tahay inaad isla markaaba hirgeliso haddii aad rajeynayso inaad ka faa'iidaysato taraafikada iibsashada fasaxa xilligan.
Waxaa jira seddex istaraatiijiyadood oo muhiim ah oo ay tahay inaad had iyo jeer dirto oo la caddeeyay inay had iyo jeer waddo beddelaad dheeri ah oo loogu talagalay dukaamada fasaxa:
71% macaamiisha fasaxa ayaa soo jiita maraakiibta free
48% macaamiisha fasaxa ayaa soo jiita soo celinta fudud
44% macaamiisha fasaxa ayaa soo jiita iswaafajinta qiimaha
17 Talooyin Beddel Ecommerce Fasax Dheeraad ah
Ku dhiirrigeli dalabyadaada maalmaha iibsiga ciidaha ugu sarreeya - oo ay ku jiraan Maalinta Thanksgiving, Jimcaha Madow, Cyber ​​Isniinta, Isniinta Cagaaran, iyo Maalinta Dhoofinta Bilaashka ah.
Upsell iyo iskutallaab iibin si loo kordhiyo qiimaha dalabka celceliska - tixgeli dalabyada sida maraakiibta bilaashka ah ee iibsashadaada, alaabada xirmooyinka, waxaad siisaa waqtiyo xaddidan iyo in ka badan.
Ha u baahnayn diiwaangelin goobta wax iibsiga - Dukaameystayaasha ay tahay inay buuxiyaan xog badan oo dheeri ah waxay u badan tahay inay ka tagayaan gaadhigooda.
Ku hagaaji mobilka - in badan oo ka mid ah dadka wax iibsanaya waxay ku baarayaan taleefannadooda casriga ah. Hadaadan diyaar aheyn waa lagaa tegayaa.
Hubso in bogagga si dhakhso leh u shuban yihiin - goobaha ecommerce badanaa waxay arkaan taraafikada diiwaanka inta lagu jiro xilliga fasaxa. Ha u ogolaanin degel gaabis ah ama jaban inuu wax yeeleeyo ganacsigaaga.
Kordhi inta jeer ee emaylka - martidaadu waxay aad ugu diyaar garoobeen inay iibsadaan inta lagu jiro xilliga fasaxa. Ha seegin fursaddaada.
Qurxin! - sii boggaaga dareen ku habboon oo xafladeed si kor loogu qaado khibradda wax iibsiga ee dareenka leh. Xitaa ka sii wanaagsan, u isticmaal kaftan si ay kuu xusuustaan.
Ku dhis liistada emaylkaaga hadiyad - u rogo booqdayaal badan kuwa joogtada ah. Sahamiso qiimaha helitaanka macaamiishaada oo tixgeli inaad kujirto hadiyad bilaash ah si aad ula qabsatid martida cusub.
Abuur dareen degdeg ah - taariikhaha ugu dambeeya ee rarka iyo iibka flash-ka ayaa abuuri kara dareen deg deg ah oo ka caawin doona dad badan oo soo booqda deg deg inay u badalaan.
Qiimo dhimis ka dhig mid soo jiidasho leh - sahamiyaan siyaabo kala duwan oo laguugu qiimeeyo qiima dhimistaada. Miyay tahay inaad sameyso 50% off, $ 25 off, ama iibsato mid bilaash ah?
Bixi taageero macaamiil oo tayo leh - taageerada dhabta ah ee macaamiisha ee tooska loogu wada hadlo, warbaahinta bulshada, ama taleefanka ayaa kaa caawin kara ka gudbida caqabadaha hortaagan iibsashada boggaaga.
Kaararka hadiyada ka dhig mid si fudud lagu iibsan karo - marka booqde uusan haysan fikradda hadiyadda ugu fiican, kaararka hadiyadu waa xulasho weyn. Ka dhig mid fudud.
Adeegso barnaamij daacadnimo ah si aad dib ugu soo celiso - soo celinta macaamilkaaga rubuca afraad ayaa kaa caawin kara wadista iibka inta lagu jiro rubuca hore ee gaabiska ah.
Bixi dalabyo gaar ah oo lagu beddelo dib u eegista - dib u eegista ayaa kaa caawin kara waditaanka beddelaad sanadka oo dhan. Ka faa'iideyso taraafikadaada sare si aad u kordhiso dib u eegista ku saabsan alaabtaada.
Sii xamuul celinta bilaash ah - siyaasad deeqsinimo leh oo soo noqosho ah ayaa macaamiisha ku abuureysa kalsooni waxayna soo celineysaa macaamiisha xitaa fasaxyada ka dib.
Ka caawi iyaga inay ka dhigaan mid shaqsiyeed - u fududee macaamiishaada inay ku soo daraan qoraal ay ku iibsan karaan hadiyado kasta.
Sii hadiyad duubitaan bilaash ah - markaad bixiso hadiyado duudduuban oo bilaash ah, waxaad yareysaa madax xanuunka macmiilka. Madax xanuunka badan ee aad iska yareyso, ayay u badan tahay inay kula macaamilaan.
Waa kuwan faahfaahinta ecommerce buuxda ee wanaagsan
Tags: Baadhidiibintaageero macaamiishadhimise-commerce infographictalooyinka elektaroonigga ahhagaajinta beddelka ecommercetalooyinka ecommerceemailinta jeer ee emaylkabilaash lacag la'aan ahmaraakiibta freekaararka hadiyaddashakhsiyeyn hadiyadduubista hadiyaddaemaylka fasaxataariikhaha iibsiga fasaxabarnaamijka daacadm-ganacsigaganacsigaganacsiga gacantahagaajinta mobiladataariikhaha iibsiga ugu sarreeyashakhsi ahaaneeddiiwaangelintasoo celinta rarkamurugodegdeg ah
Waa maxay Kormeerka Warbaahinta Bulshadu? Wax Kasta Oo Ay Tahay Inaad Ogaato!
2, 2016 at 1: 17 AM
Maqaal aad u faa'iido badan oo ku mahadsan inaad nala wadaagto.